Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 17/10/2020)
On ọ bụla European njem ụgbọ okporo ígwè njem, otu n'ime ndị kasị expenses bụ ulo. Oke nke ebe na-ehi ụra n'abalị nke ukwuu na-adabere na gị ego na ụdị ahụmahụ ị na-achọ. Night ụgbọ oloko are a good option for okodu obere ego na ulo. E nweghị ọzọ ego njem na a n'abalị ụgbọ okporo ígwè na ị ga-jirichaa gị oge site na-ejegharị ejegharị mgbe ị na-ehi ụra. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị si Milan ka Paris ma ọ bụ Venice na Paris na Thello Ụgbọ oloko bụ otu oru oma na ala ụzọ ruo gị ebe. Traveling on a night train is one of the great interrailing tips as it is a fantastic way to stretch your budget n'oge gị njem!
ọtụtụ obodo ndị ọzọ dị ka Amsterdam have an annual night where all museums open their doors to the public for free. Gị ego na-adịghị ga-enwe nnukwu inyocha ndị a ịrịba obodo. Jide n'aka na- uru nke ndị a niile magburu onwe free nkiri.
Rie ebe ndị obodo na-eme – Interrailing tips
Na-eche echiche nke interrailing Europe? Jiri anyị Interrailing Atụmatụ na Gaa Zọpụta A Train online lelee niile anyị nanị n'ego ụgbọ na-amalite na-eme atụmatụ gị ọzọ njem. E nwere ọtụtụ ego n'ego ụgbọ dị nile dị iche iche European okporo ígwè netwọk. Make sure to keep a lookout for the latest discounts by following our facebook na twitter pages too.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/interrailing-tips/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)